फ्रान्समा जम्दै नेयमार, के लिग वान ले अहिले सम्मकै उत्कृष्ट खेलाडी भेटेकै हो त ? « Sansar News
फ्रान्समा जम्दै नेयमार, के लिग वान ले अहिले सम्मकै उत्कृष्ट खेलाडी भेटेकै हो त ?
५ भाद्र २०७४, सोमबार १२:२५
५ भदौँ एजेन्सी । फ्रेन्च लिग अर्थात लिग वान अघिल्ला सिजनहरुमा त्यति सुनिएको नाम अवश्य होईन् । मिडियाहरुमा लिग वानको चर्चा खासै सुन्नमा आएको थिएन् तर यस सिजन वार्सिलोनाबाट नेयमारको किर्तिमानी आगमन सँगै लिग वानको चर्चा एका एक चुलिएको छ । नेयमारको डेब्यु खेलमा मात्र १४० देशका टेलिभिजन च्यानलहरुले खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनुले लिग वानमा बढेको उत्साहलाई पुष्टि गर्न सकिएको छ ।
नेयमारले लिगवानको डेब्यु खेलमै सुन्दर गोल गरेका थिए । उनले सोही खेलमा एक गोलको लागि सहयोग समेत गरेका थिए । त्यसपछि हिजो भएको नेयमारको दास्रो खेलमा महत्वपुर्ण दुई गोल गर्नुको साथै दुई गोलको लागि एसिस्ट गरेका थिए ।
फुटबलमा गोललाई निर्णायक त मानिन्छ त खेल मैदानमा खेलाडीले देखाएको कुशलतालाई अझ विशेष महत्व दिने गरिन्छ । हान्ने रागोँ ले जसरी गोल गर्नुलाई खेलाडीको पुर्णता सँग जोडिनु मुर्खता मान्न सकिन्छ तर नेयमारको सन्र्दभमा उनले आफुलाई निकै खरो रुपमा उतारेका छन् । नेयमारको आगमनले पिएसजीको खेलको गतिशिलतालाई निकै नै माथि उठाएको देख्न सकिन्छ् । उनले छोएको प्रत्येक बलमा खेल प्रतिको उत्साहले लिग वानलाई अझ सुन्दर बनाएको छ तर्सथ नेयमारको पिएसजी आगमन लिग वानले नै ईतिहासको प्रतिभाशाली खेलाडी भेटेको मान्न सकिन्छ ।